कठै बिशाललाइ के रोग लाग्यो यस्तो अनौठो ? पछाडीबाट हेर्दा झण्डै सात्तो जान्छ, आफ्नो रोगको बारेमा भावुक हुँदै भन्छन्, (भिडियोसहित) – Namaste Host
कठै बिशाललाइ के रोग लाग्यो यस्तो अनौठो ? पछाडीबाट हेर्दा झण्डै सात्तो जान्छ, आफ्नो रोगको बारेमा भावुक हुँदै भन्छन्, (भिडियोसहित)
February 1, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on कठै बिशाललाइ के रोग लाग्यो यस्तो अनौठो ? पछाडीबाट हेर्दा झण्डै सात्तो जान्छ, आफ्नो रोगको बारेमा भावुक हुँदै भन्छन्, (भिडियोसहित)
काठमाण्डौ । पाँचथर फिदिमका विशाल केरुंगलाई एउटा यस्तो रोगले समातेको छ । जस्को उपचार त छ तर महंगो छ । महंगै भएपनि उपचार त हुन्छ तर एकातिरबाट अप्रेसन गर्दा अर्कोतिरबाट फेरी त्यो रोगले समाति दिन्छ । उनको उमेर झण्डै ३० वर्षको भएको छ । र यो उमेरमा नै उनलाई लागेको यो रोगले साह्रै दुःख दिएको छ । डाक्टरहरुको भनाई अनुसार हेर्दापनि निकै नै भयानक उनको यो रोग संसारमै बिरलै मानिसलाई लाग्ने गर्छ ।
विशाललाई क्यालोईद नामक रोग लागेको छ । यो रोग लागेपछि शुरुमा विशालको शरीरको छालामा केही मासुको डल्लो देखा पर्यो पछिभने त्यो विस्तारै बढ्दै गयो । त्यो यसरी बढ्दै गयो कि हेर्दा अहिले ती मासुका डल्लाहरुले विशालका दुवै पाखुरालाई पुरै छोपेको छ । पछाडिबाट हेर्दा लाग्छ उनको शरीरमा गोबरका केही थुप्राहरु कसैले राखिदिएको हो । दुवै पाखुरमा मासुको डल्लो बोकेर बसेका विशालको विगत केही महिनादेखि उपचार भई रहेको रहेछ ।
उनको उपचार अरु बिरामीको जस्तो सजिलो वा एक पटक अप्रेसन गरेपछि निको हुने पनि रहेनछ । उनको शरीरमा पलाएको मासुको केही भागहरुको अप्रेसन त भएको रहेछ तर एकातिरबाट अप्रेसन गरेर मासुको भागर डाक्टरहरुले फालिदिएपछि अर्कोतिरबाट फेरी नयाँ मासुको भाग पलाउने रहेछ । यो कुराले विशाल झनै चिन्तित बनिरहेका छन् । तर पहिलाको तुलनामा उनी उपचार भई रहेको हुनाले खुशी पनि देखिन्छन् ।
विशालको आर्थिक अवस्थाको कुरा गर्ने हो भने उनीसंग आफुलाई लागेको रोगको उपचार गराउने पैसा पनि छैन । अहिलेसम्म उनको जे जसरी उपचार भई रहेको छ त्यो सबै सहयोगको आधारमा भई रहेको छ ।
उनी भन्छन्,‘मलाई यस्तो रोग लागेपछि साह्रै नै चिन्ता लाग्यो । किनभने मसंग उपचारकोलागी त्यति पैसा थिएन । जति डाक्टरले भन्नु भएको थियो । तर पनि मलाई सहयोगी मनहरुले सहयोग गर्नु भयो । र अहिले मेरो शरीरमा पलाएको केही मासुको भागहरुको अप्रेसन भएको छ । म सबैलाई धन्यबाद दिन्छु । र मलाई अझैं सहयोग गरिदिनुहोस् पनि भन्दछु ।’ भिडियोसहित
करोडौ लगानीमा निर्माण गरिएको धनगढीको फर्निचर उद्योगमा उद्घाटन नहुँदै क्षणभरमै बन्यो खरानी
March 6, 2021 Bijay Lama
May 28, 2021 Bijay Lama
६ महिने शिशुलाई मा`रेको आरोपित आमाजुले मिडिया घरमै आउदा ढोका लगाइदिइन ,गल्ति गरेकै भएर आइनन्,यतिसम्म भयो (भिडियो हेर्नुस्)